Samuel Eto’o oo saadaaliyay kooxda xilli ciyaaredkan ku guuleysan karta La Liga… (Ma Barcelona mise Real Madrid?) – Gool FM
(Spain) 26 Jan 2020. Halyeeyga reer Cameroon ee Samuel Eto’o ayaa saadaaliyay kooxda ku guuleyan karta xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Samuel Eto’o ayaa filaya in kooxdiisii hore ee Barcelona ay kaga guuleysan doonto horyaalka La Liga ee dalka Spain naadiga ay ku dagaalamayaan ee Real Madrid.
Valencia ayaa guuldarro xanuun badan baday xalay kooxda Barcelona oo marti ugu aheyd garoonka Mestalla, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Haddaba Samuel Eto’o ayaa wareysi uu bixiyay kaddib guuldarradii ay kooxda Barcelona kala kulantay Valencia wuxuu saadaaliyay kooxda ku guuleysan karta horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan wuxuuna yiri:
“In kasta oo Barcelona ay guuldarro ka soo gaartay Valencia, haddana waxaan filayaa in kooxda reer Catalonia ay ku guuleysan karto koobka horyaalka La Liga, waa tan ugu fiican uguna dhow inay ku guuleysato”.
Si kastaba ha noqotee, kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxay hada wada hoggaaminayaan horyaalka La Liga, waxayna labaduba heystaan min 43 dhibcood, laakiin Los Blancos oo aan wali ciyaarin haddii ay caawa guul ka gaarto naadiga Real Valladolid, waxay kali ku noqon doontaa hoggaaminta horyaalka.